Fikasana haka an-keriny : Maty voatifitra ilay karana
LEGENDE / Farouk Daya, ankavia amin’ny sary, ilay namoy ny ainy
Namohy ny ainy nandritra ny trangam-panafihana mitam-piadiana ny harivan’ny 31 janoary tokony ho tamin’ny 6 ora ariva i Irfan Farouk Daya, teratany karana 23 taona. Araka ny vaovao voaray, teo andalam-podiana niaraka tamin’ny fiakaviany ity tovolahy ity no izao niharan’ny fanafihana izao.
Morondava : Tsy milamina !
Tsy vao androany no nahafantarana fa manjaka ny mpanao ratsy amin’ny tanàna maro manerana ny nosy, ary isan’izany i Morondava. Mitebiteby araka izany ny mponina, fa indrindra ireo mpiavy.
Dahalo tao Mampikony : Mandriaka hatrany ny ra sy ranomaso !
Omby 200 no lasa, jamà efa-dahy no maty voatetitetikin’ny dahalo nandritran’ny fanafihana nisy tao amin’ny kaominina Malakialina sy Mampikony. Dahalo efa ho 55 nirongo basy lava miaramila Mas 36, pilotra ary basy Kalachnikov iray no niara-nanafika izany fokontany izany ka izao nahitana vono olona mahatsiravina izao. Bepatso, Ambalavelona, Ambalahasy, ireo no tanàna nolalovan’ireo tsy mataho-tody ireo tamin’izany.
Kidnapping à Ambohimanarina : L’enfant rendu à ses parents contre rançon
Un enfant d’épicier âgé de 5 ans a été enlevé à Ambohimanarina par trois malfrats, le 22 novembre. Vendredi dernier, trois individus : un couple marié et une femme, ont été transférés au Tribunal de Première Instance à Anosy, après une enquête diligentée par la Brigade Criminelle de la police.
Fenerivo-Atsinanana : Olona 18 naiditra am-ponja vonjimaika !
Mbola mitohy hatrany ilay raharaha Ambodihazinina Toamasina ankehitriny, olona miisa 18 no naiditra am-ponja vonjimaika ao Ambalatavoangy ary ny iray lasa vavolombelona. Ny roa tamin’ireo anefa dia vehivavy.